Subagga lagu shubo qashin madow leh | Black Périgord gawaadhida waaweyn ee sanduuqa loogu talagalay VIP - VIP truffles.
Subagga truffle madow, si aad ugu qanciso martidaada
Waxaad jeceshahay inaad ka farxiso qoyskaaga, asxaabtaada adoo siinaya suxuun jilicsan. Waxaad jeceshahay inaad ku xoojiso suxuuntaada alaabooyin gaar ah. Marka, si dhakhso leh u hel subagga shucaaca madow, oo ah wax soo saarka carrada Faransiiska.
Subagga la daadiyay waxaa ku jira dhadhammo dhab ah oo madow oo sidoo kale loo yaqaan Tuber Mélanosporum, xamuulleyda laga soo goosto Koonfurta Faransiiska. Gawaaridaan waaweyn waxaa lagu qiimeeyaa khabiiro takhasus gaar ah leh maxaa yeelay waxay dhadhamiyaan khiyaano jilicsan oo ah hazelnut, misk iyo undergrowth. Waxay toosin doonaan burooyinkaaga dhadhankaaga. Subag tayo leh oo leh buunshaha waaweyn waxaa ku jira:
Subagga la caddeeyay, 3% dhalo madow, milix
Wixii tagliatelle leh subagga truffle, saxan macaan oo aan la oggolaan karin.
Subagga shucaaca madow waa wax soo saar leh dhadhan aan caadi ahayn. Laakiin, waa madadaalo la awoodi karo. Dhaqso oo dalbo si aad u xoojiso diyaargarowgaaga cuntada!
Subagga waa la cadeeyay ka dibna waa la nadiifiyay si uu u qaboojiyo kaliya marka uu furmo iyo inuu si dhakhso leh u cuno.